Panipat (2019) | MM Movie Store
မာရာသတိုငျးမှာရှိတဲ့ တိုငျးသူပွညျသားတှရေဲစှမျးသတ်တိနဲ့ပွညျ့စုံပွီး သူတို့တိုငျးပွညျရဲ့လကျအောငျမှာ တိုငျးပွညျငယျတျောတျောမြားမြားရှိကွတယျ..သူတို့တိုငျးပွညျကိုလညျး နှဈစဉျ
အခှနျပေးဆောငျကွရပါတယျ..ဒါပမေယျ့တဈနမှေ့ာတော့ တိုငျးပွညျငယျတဈခုကအခှနျမပေးဆောငျတဲ့အပွငျ ရာဇသံလာပေးတဲ့စဈသူကွီးတဈဦးကိုပါ သတျဖွတျပဈလိုကျတယျ..
အဲ့ဒီမှာ ဇာတျလမျးကစတော့တာပဲ….ဒီတိုငျးပွညျငယျဟာ အာခံရတဲ့အကွောငျးရငျးလညျးရှိပါတယျ…အဲ့ဒါက အာဖဂနျနစ်စတနျဧကမရာဇျမငျးတဈဦးနဲ့ပူးပေါငျးပွီး အငျ့အားတောငျ့တငျးလာတဲ့အပွငျ အိန်ဒိယတဈပွညျလုံးကိုသိမျးပိုကျဖို့အထိတောငျ ရညျရှယျထားပါတယျ….
ဒီဇာတျလမျးဟာပွသခြိနျသုံးနာရီနီးပါးကွာမွငျ့ပမေယျ့ အစအဆုံးထိ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတိုငျးက ဆှဲဆောငျမှုရှိပါတယျ..ဆာဒါးရှိဗျဟာ အာဖဂနျတပျနဲ့စဈခငျးဖို့အတှကျ သူ့လကျအောကျခံတိုငျးပွညျတှနေဲ့ပူးပေါငျးဖို့ ကွိုးစားအားထုတျပုံတှေ..စဈနညျးဗြူဟာတှေ တှမွေ့ငျရသလိုတိုကျပှဲတှေ အကျရှငျခနျးတှကေိုလညျး မြားစှာကွညျ့ရမှာပါ….
လကျအောကျခံတိုငျးပွညျတှကေရော ဆာဒါးရှိဗျမြှျောလငျ့ထားသလို သူနဲ့အတူပူးပေါငျးပွီးအာဖဂနျတှကေို တိုကျထုတျကွမှာလား..တိုကျတဲ့စဈပှဲတှရေော အောငျမွငျပါ့မလား….ဆိုတာကိုတော့…..
မာရာသတိုင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီး သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လက်အောင်မှာ တိုင်းပြည်ငယ်တော်တော်များများရှိကြတယ်..သူတို့တိုင်းပြည်ကိုလည်း နှစ်စဉ်
အခွန်ပေးဆောင်ကြရပါတယ်..ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ တိုင်းပြည်ငယ်တစ်ခုကအခွန်မပေးဆောင်တဲ့အပြင် ရာဇသံလာပေးတဲ့စစ်သူကြီးတစ်ဦးကိုပါ သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်..
အဲ့ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းကစတော့တာပဲ….ဒီတိုင်းပြည်ငယ်ဟာ အာခံရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိပါတယ်…အဲ့ဒါက အာဖဂန်နစ္စတန်ဧကမရာဇ်မင်းတစ်ဦးနဲ့ပူးပေါင်းပြီး အင့်အားတောင့်တင်းလာတဲ့အပြင် အိန္ဒိယတစ်ပြည်လုံးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အထိတောင် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်….
ဒီဇာတ်လမ်းဟာပြသချိန်သုံးနာရီနီးပါးကြာမြင့်ပေမယ့် အစအဆုံးထိ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တိုင်းက ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်..ဆာဒါးရှိဗ်ဟာ အာဖဂန်တပ်နဲ့စစ်ခင်းဖို့အတွက် သူ့လက်အောက်ခံတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ပုံတွေ..စစ်နည်းဗျူဟာတွေ တွေ့မြင်ရသလိုတိုက်ပွဲတွေ အက်ရှင်ခန်းတွေကိုလည်း များစွာကြည့်ရမှာပါ….
လက်အောက်ခံတိုင်းပြည်တွေကရော ဆာဒါးရှိဗ်မျှော်လင့်ထားသလို သူနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးအာဖဂန်တွေကို တိုက်ထုတ်ကြမှာလား..တိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေရော အောင်မြင်ပါ့မလား….ဆိုတာကိုတော့…..
My Punch-Drunk Boxer(2020)